Chile kwupụtara ọnọdụ nke ọnọdụ mberede ka Santiago gbawa na ọgba aghara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Chile kwupụtara ọnọdụ nke ọnọdụ mberede ka Santiago gbawa na ọgba aghara
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye-isi Chile bụ Sebastian Pinera
Onye isi ala nke Chile kwupụtara ọnọdụ nke ọnọdụ mberede na-esochi ngagharị iwe na-akpata site na ụgwọ njem ụgbọ njem n'oge na-adịbeghị anya maka njem ọha na eze n'isi obodo Chile.
Foto ndị na-ekwo ekwo na-egosi ọgba aghara ahụ na ogbe ndịda Santiago, ebe ngosipụta ahụ ghọrọ ihe ike kachasị na Fraịde, na foto na-egosi ndị mmadụ na ndị uwe ojii ọgba aghara. Ndị na-eme ngagharị iwe na-agbakwa ọfịs metro na ụlọ ọrụ ọfịs na etiti obodo ahụ.
N’ikwu okwu na mba ahụ n’isi ụtụtụ Satọdee, Onye isi ala Sebastian Pinera kwuru na ya ga-akpọku iwu pụrụ iche nke steeti ka ọ gbaa ndị ọgba aghara ndị isi ojii gbara ọkụ, bukọrọ ihe, ma bibie akụrụngwa ọha na eze n’isi obodo ahụ.
Gọọmentị mụbara ọnụahịa maka njem ụgbọ ala Metro na mbido Ọktọba, na-eme ka ụmụ akwụkwọ kọleji na mahadum pụta n'okporo ámá.
N'okwu ya, Pinera kwere nkwa na ya ga-agba mbọ "belata ahụhụ nke ndị na-abawanye n'ụgwọ ụgbọ."
Emechiela usoro metro ahụ, ndị ọchịchị na-ekwu na "oke mbibi" mere ka ọ ghara ikwe omume iji ụgbọ oloko rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Chile ọgba aghara ọnọdụ mberede nchekwa njem nleta